Cancala Dhangii - Arfii -Galteewwan - Bocquufili
Baafata qabduu(wardiilee) Dhangii - Fuula - Irraantoo/Jalaantoo - Guulaali
Barruu filameef halluu qinddeesi. Duubbee ifaa guraacha akkasumas duubbee dukkanaaf immoo halluu barruu adii qindeessuuf, ofumaa fili.
Dibani haala nidanda'a dhiisuuf,yeroo tokko cuqaasi ykn Furtuu dhiisii dhiibi.
Galteen - homtuu hin fayyadamee
Arfiilee qubee xixiqqaa filatame gara qubee arfiilee qubee guuddaatti jijjiira.
Qube xixiqqaan -arfiilee qubee guddaa filatame garaarfiilee xixiqqatti jijjiira.
Bocquun mata dure-arfii jalqaba tokkoon tokko jecha filatamee gara arfiilee qubee guddaatti jijjira.
Qubxiqqaan gurguddoo-arfiilee qubee xixiqqaa filatamanii gara arfiilee qubee guddaatti jijjiira,ittaansuudhaan hammamtaa isaanii xiqqeessa
Barruu filameef fayyadamuuf hirpha galtee fili. Hirphi dhiita'aa arfiileen yemmuu fuulaa ol ka`an akka argaman taasisa. Hirphi dhooqataa arfiileen yemmuu gara fuulaatti dhiibaman akka argaman godha.
LibreOffice gabateewwan halluu